फागुन १९ देखि २५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फागुन १९ देखि २५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
डिसी नेपाल , १९ फाल्गुन २०७४
यो साता शुरुमा राम्रै रहे पनि अन्तिम भने निरस हुन सक्नेछ । शुरुमा अरुको कमी(कमजोरीबाट फाइदा लिन सकिनेछ । गरेका कामहरुबाट लाभ राम्रै हुनेछ । अरुले गर्न नसकेका वा अल्झिएर बसेका पुराना कामहरु पनि सुल्झाउन सकिनेछ । व्यापार व्यबसायमा सोचे अनुसारको लाभ पनि लिन सकिनेछ । बैदेशिक ब्यापारमा लागेकाहरुलाई यो समय अति उतम हुनेछ । समग्र लाभको मात्रा बढ्नेछ । पैसाको कमीले रोकिएका कामहरु पुरा गर्ने सकिनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थमा सामान्य समस्या आए पनि ध्यान प्रणय सुख र मोजमज्जमा जानेछ । खर्च बढे पनि मनमा आनन्द महशुस हुनेछ । धर्मकर्ममा मनलाई लगाए तनावबाट चाँढै मुक्ति पाईनेछ ।
साता सामान्य रुपमा बित्नेछ । नसोचिएको र बेअर्थको यात्राले केहि तनाव महशुस हुनेछ । लगानी डुब्ने आशंकाले गर्दा साझेदार बिचमा केहि मनोमालिन्य पनि हुन सक्ने भएकोले सचेत रहनुहोला । आफन्तको शोक समाचारले मनमा अशान्ति हुन सक्नेछ । साताको अन्तिम तिर काममा केहि अफ्ठ्यारो आउन सक्ने हुनाले सजग रहनुहोला । सजिलै हुने काममा पनि बिलम्ब हुन सक्नेछ । बिवादबाट हानीको मात्रा बढ्न सक्ने भएकोले बिवाद गर्नबाट बच्नु होला । तापनि पेशाकर्मीहरुको पदोन्नतिको संभावना प्रबल रहेको छ । समयले साथ दिनाले आम्दानी र बचत केहि बढ्ने छ।
मंगलबारबाट साता राम्रो रहने छ । प्रतिस्पर्धामा विजय हुनाले मनमा आनन्द हुनेछ । तापनि आफ्नो हठले गर्दा मानमा कमी गराउन सक्ने हुनाले सजग रहनुहोला । शुभ चिन्तकहरुको कुरा नसुनि एकोहोरो आफ्नो मात्र कुरा गर्नाले आफन्तहरु टाढिने छन । काममा बिलम्ब भए पनि सफलता भने पाईने छ । कुटनैतिक चातुर्यले व्यापारमा फाइदा हुने भएकोले सोहि रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुनेछ । साताको अन्तिमबाट समयले राम्रै साथ दिने भएकाले महत्वपूर्ण कामहरु पछिलाई सार्दा बेस हुनेछ । आम्दानीको मात्रा बढ्ने छ । काममा पनि क्रमश सफल भइने छ ।
साता मध्यम रहने छ । बढेको महत्वाकांक्षालाई कार्यान्वयन गर्न कठिन पर्नेछ । साताको शुरुमा आफुले सोचे अनुरुप नै कामहरु पुरा हुनेछन तर सोमबार देखि समय फरक हुने हुनाले सजग रहुन होला । राम्रो समय आउँदै गरेकाले काममा आएका बाधा अड्चनले दिकदारी महशुस गराए पनि निराश हुनु पर्ने छैन। शत्रुहरु बिस्तारै परास्त्र हुनेछन । आफू गरेका काममा सरकारी सहयोग पाईने छैन बरु दण्ड जरिवानामा परिने संभावना भएकोले सावधान रहनु जरुरी छ। पहिले गरेको बचतबाट खर्च टार्नु पर्ने परिस्थिती सिर्जना हुन सक्नेछ । भाग्यले साथ दिनाले आम्दानीको स्थिती भने राम्रै रहने छ ।
यो साता सावधान नभई काम गरेमा निराशाजनक हुन सक्नेछ । बेसुरमा बोल्नाले अरुको तपाँई प्रति विश्वास कम हुन सक्नेछ । सहोदर तथा आफन्त संग मनमुटाव हुनसक्ने हुनाले ब्यबहार गर्दा सचेत रहनुहोला । आफ्नो दक्षता भएको काम गर्न पाईने छैन । सानोतिनो काममा अल्झनु पर्नाले अवसर गुमेको महशुस हुनेछ । व्यबसाय बिस्तारका लागि लगानी बढाउन सकिने छैन । तर सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न भने सकिनेछ । असमझदारीले व्यापार व्यबसायमा असर गर्नसक्ने हुनाले सजग रहुन जरुरी हुनेछ । तापनि छिट्टो फाईदा हुने शेयर बजारमा लगानी गर्दा बढि लाभ लिन सकिनेछ । आकस्मिक लाभका अवसर भने आईनै रहने छन।
साता मध्यम रुपमा बित्नेछ । सोचे अनुसार काम सफल हुनाले ठुला काम गर्ने बारेमा सोचिने छ । बचत बढाउने थुप्रै अवसर आउनाले मनमा प्रसन्नता महशुस हुनेछ । लाभका अनेक स्रोतहरु हुनाले बढेको आम्दानी तथा बचतले सबैजसो आवश्यकताहरु पुरा हुनेछन । सहोदरहरुको सहयोगले धेरै काम गर्न सकिनेछ । तर साताको उत्तरार्ध देखि सफल हुन दोब्बर कोशिस गर्नु पर्नेछ। कामलाई सफल बानउन अप्रिय सम्झौता पनि गर्नु पर्नेछ । समय क्रमश चुनौतिपूर्ण बन्ने हुनाले अहिले देखि काममा चनाखो तथा ब्यबहारमा कुसल बन्नु पर्नेछ । तापनि जीवनसाथीको सहयोगले गर्दा भाग्यले साथ दिनेछ र काममा सफल भईनेछ ।
यो साता राम्रै बित्नेछ । पैत्रीक सम्पतिमा केहि झमेला भए पनि अरु क्षेत्रमा सफल भइनेछ । शत्रुहरु बिस्तारै पराजित हुनेछन । बैदेशिक ब्यापारमा लागेकाहरुलाई यो समय बिशेष राम्रो हुनेछ । बैदेशिक ब्यापारलाई दिगो रुपमा फैलाउने अवसर पाईनेछ । समस्याले दुख दिए पनि आफ्नो पौरख सिद्ध गर्न सकिनेछ । नयाँ लगानी गर्ने अवसर आउने छ। नियमित आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नेछन । तर शुभ चिन्तकहरुको सल्लाहमा अगि बढ्दा सुरक्षित भइने हुनाले उनीहरुको सानिध्यमा बस्दा श्रेयस्कर हुनेछ । पेशाकर्मीहरुका लागि २ हपता जति पछि उतम समय आउने छ । प्रणय सुखमा भने केहि बाधा पुग्ने देखिन्छ ।
शुरुमा साता उत्साहपूर्ण नै लागे पनि आईतबार र सोमबार नैराश्यता अनुभव हुनेछ । मन सुखसयल तिर जानेछ र खर्च पनि बढ्नेछ । बाँकि सप्ताह राम्रो रहनेछ । मनमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने समय आउनाले ब्यस्तता बढ्नेछ । समयले पुरै साथ नदिनाले झुट्टा आरोपहरु लाग्न सक्नेछ । तपाँईले सहि कुरा बोले पनि सुन्नेले नकारात्मक सुन्नेछन। तसर्थ अरुलाई सल्लाह दिनबाट बच्नु होला । पहिले गरेका गल्तिहरु सुधार्ने अवसर आउने छन । पारिवारमा भैरहेको कलह केहि कम हुनेछ । सन्तान पक्षबाट शुभ समाचार सुन्न पाईनेछ ।
साता सामान्य रुपले राम्रै बित्नेछ । आफुले खटिएर काम गर्दा पनि आशातित सफलता नपाईनाले मनमा छिट्टो धन कमउन चाँडै प्रतिफल दिने काम तिर जानेछ तर यस्ता काममा अहिले सफल नभइने हुनाले यस्तो कुरामा ध्यान नदिँदा नै राम्रो हुनेछ । बढेको नकारात्मक सोचाइ केहि मात्रामा कम हुनेछन । आफूलाई सिद्ध गर्ने केहि कामका अवसर आउनाले केहि सानत्वना दिनेछ। सहोदरहरुको सहयोगले थप कामहरु पुरा हुनेछन तापनि उनीहरु संग असमझदारी बढ्न सक्ने हुनाले सचेत रहन जरुरी छ । बचत बढाउन बढि नै मेहनत गर्नु पर्नेछ । साताको अन्त तिर अस्पताल बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने हुनाले स्वास्थ प्रति विशेस सचेतता आवश्यक हुनेछ ।
साता राम्रो बित्नेछ । ब्यर्थमा परिश्रम गर्नु पर्दा र बोलिको प्रभाब घटनाले मनमा केहि खिन्नता हुनेछ । व्यवसायमा भैरहेको केहि उतार चढाबलाई केहि मात्रामा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । तापनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु १०–१२ दिन पछि गर्दा राम्रो हुनेछ । साथीभाई तथा सहोदरको सहयोगमा प्रसस्त फाईदा हुने कामको अवसर पनि पाईनेछ । बोल्दा सचेत नभए आफन्तहरु टाढिन सक्नेछन । आफ्नो मान घटने भएकोले कुनै कुराको लागि बाचा नगर्दा राम्रो होला । भाग्यले साथ दिनाले अचल सम्पतिमा भने बृद्धि हुनेछ । आम्दानी राम्रो नै रहनेछ भने आकस्मीक लाभका अवसर पनि पाईनेछ । शेयरका लगानिकर्ताहरुलाई भने यो समयमा उतम छ । खर्च कम गर्नेका लागि भने बानी सुधार्नु पर्ने देखिन्छ ।
साताको शुरुमा मन बितृष्णा तिर जानेछ भने बाँकि दिनहरु सामान्य रुपमा बित्नेछ । परिस्थितीले मन हठधर्मी बन्नेछ र गलत निर्णय लिईन सक्नेछ । एकोहोरो जिद्दिले कामहरु सजिलै हुने छैनन । साझेदारहरु बिच सामान्य असमझदारी भए पनि उनीहरुको सहयोगले केहि कामहरु गरिनेछ । तपाँईको बिरोध गर्नेहरु आफै पराजित हुनेछन । साताको उत्तरार्ध देखि बचत बढाउने मौका मिल्नेछ । अचल सम्पति केहि न केहि जोडिनेछ । गरिरहेको कामको मुल्याङ्कन राम्रो हुनाले पदोन्नति तथा पदलाभ हुनेछ । लाभको मात्रा सोचे अनुरुप नै हुनेछ । नियमित आम्दानी हुने कामहरु गरिनेछ । घरमा आवश्यक भएका मनोरन्जनका साधनहरु जोडिनेछ । अल्पकालमा नै लाभ हुने कामहरु भने यो समयमा नगर्दा राम्रो हुनेछ । पठनपाठनका लागि समय उतम छ । आमा तथा सन्तानको स्वास्थले केहि चिन्ता दिनेछ ।
साताको शुरुमा राम्रो भए पनि सोमबार र मंगलबार मनमा अशान्ति महशुस हुनेछ । खर्च धान्न नसकिने गरि बढनाले यसको व्यबस्थापन सहि रुपमा गर्नु जरुरी छ । मनमा मोजमज्जा गर्ने चाहना बढ्ने छ भने नयाँ पहिरनहरु खरिद गरिने छ । साथीभाईको कारणले गलत निर्णय लिईन सक्ने हुनाले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सावधान हुनु पर्नेछ । मनको जिद्दिपन बिस्तारै कम हुँदै जानेछ । आकस्मीक लाभका अवसरहरु पाईनाले खर्च धान्न सहयो गर्नेछ । सरकारीबाट असयोग हुन सक्ने हुनाले केहि समयका लागि सरकारी कामहरु रोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । काममा बढि मेहनत गरे पदोन्नति र प्रशंसा हुनेछ । आम्दानीको अवस्था राम्रै रहनेछ । मांगलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनाले आफन्तसंग भेटघाट गरिनेछ।